कोरोनाबाट ब’चेर क’सरी शा’रीरि’क स’म्बन्ध रा’ख्ने ? चर्चित डाक्टरले दिइन् यस्तो सुझाव – Kavreonline Patra
सुन्दर देखिनका लागि कुकुरको पिसा`ब पिउने गर्छिन् यी युवती…
मुख्य पृष्ठ /Entertainment/कोरोनाबाट ब’चेर क’सरी शा’रीरि’क स’म्बन्ध रा’ख्ने ? चर्चित डाक्टरले दिइन् यस्तो सुझाव
जो’डीहरु शा’रिरीक स’म्बन्ध कसरी बनाउँछन् ? यो प्रश्न पनि उठ्ने गरेको छ किनभने कोरोना यो सन्सारमा आएको आड महिना बढि भै सक्यो र हरेक क्षेत्रले यसलाई प्र’भावित पारिरहेको छ भने यौ’न जी’वन प्रभावित नहुने कुरै भएन ।
एक जना चर्चिच डाक्टर थेरेसा टमले जोडीहरुलाई बिभिन्न सुझाव दिएकी छिन् । उनी भन्छिन्, चु’म्बन न’गर्नुहोस् र मा’स्क ल’गाउनु होस् । डाक्टर थेरेसा टम क्यानाडाका प्रमुख मेडिकल अफिसर हुन् । उनले मानिसहरु लामो समय एक्लै बस्दा दि’ग्दार हुने र बयस्कलाई शा’रिरीक स’म्बन्ध आव’श्यक हुने बताएकी छिन् ।